Golaha shacabka JFS oo akhrin labaad ku samaynaya wax ka bedelka xeerka badroolka dalka – Kalfadhi
Golaha shacabka JFS oo Muqdisho ku leh mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa ayaa maanta loo qaybiyay akhrinta labaad ee wax ka bedelka sharciga badroolka dalka.
Kulanka maanta oo ahaa fadhiga 10naad ee Kalfadhiga 5naad oo ay soo xaadireen 175 xildhibaan ayaa mudanayaasha loogu qaybiyay akhrinta wax ka bedelka xeerkan.
Xildhibaanada ayaa laga filayaa in ay talooyin sharci iyo fasiraad ku soo sameeyaan xeerka dabadeedna ay golaha ku soo celiyaan, si markaas wax looga bedelo.
Baarlamanka ayaa hore akhrin ugu sameeyay xeerka badroolka, sida ku cad ajandaha kulanka maanta ee golaha shacabka.
Arrinta la xiriirta sida loo maamulayo khayraadka oo shidaalku ka mid yahay ayaa qayb ka ah arrimaha uu inta badan salka ku hayo khilaafadka siyaasadeed ee dowladda fedeeraalka iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Gudoomiye Ismaaciil oo sheegay in qabaa’ilka iyo dadka awoodda leh ay saamayn ku leyihiin in aan caddaaladda loo sinnaan